ခေတ်မှီ ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်လှပပြီး၊ လေးထောင့်ပုံသဏ္ဍာန် ရှိပါသည်။ အလှဖန်တီး ရေတိုက်စားမှုဒဏ်ခံ နိုင်ပြီး သဘာဝရွှေလာငွေလာကျောက်တုံး အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ မိမိ၏နေအိမ်၊ အဆောက်အဦး၊ တိုက်တာ၊ ကွန်ဒို၊ ဟိုတယ် များအတွက် ခန့်ညားထည်ဝါစေပြီး မြင်သူတိုင်း စိတ်ကြည်လင်အေးချမ်းနိုင်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းစုံကာလာစုံ ကာချာစတုန်း (ရွှေလာငွေလာကျောက်တုံး) အမျိုးမျိုးအားလည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ We also have culture stones in different designs and colors at our home mart. Please message us, call or visit our showroom for more details. Shwe Myitta Home Mart 968 Pyay Road, 10th Mile, Insein Tsp, Yangon Ph: 01-650615, 647621, 646695, 663724, 09-784011209, 09-784011205
SCG Smartwood Shading စနစ်သည် အပြင်အပူဒဏ်ခံနိုင်အောင် အပူလျော့ စနစ် ကိုထည့်သွင်း အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် နေရောင်ဒဏနှင့် ရာသီဥတု ဒဏ် ခံနိုင်သော သစ်သားအမျိူးအစား ဖြစ်သည်။1.5 &amp; 1.2 မီတာ အရှည်ရှိပြီး အရောင်ကတော့ ပုံတွင်ပြထားသည့် အရောင်သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။SCG တံဆိပ် ပါ သစ်သားဖြင့် အထူးထုတ်လုပ်ထားသည်။ဥယျဉ်များ ၊ ပန်းခြံများ နှင့် အပြင်ဘက်တွင် အပန်းဖြေထိုင်ခုံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။လူအများအပြားသွားလာသည့်နေရာများတွင် ခေတ္တအနားယူနိုင်ရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ထိုင်ခုံမျက်နှာပြင်ကို အချောသတ်ပြုလုပ်ထားပြီးအလွန်အကြမ်းခံသည်။သဘာဝအရောင်တိုင်းထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အစွန်းအထင်းခံနိုင်သည်။အရည်အသွေးမြင့် သစ်သားဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အလွယ်တကူ ဆွေးခြင်း၊ပျက်စီးခြင်း နှင့် ချစားခြင်း၊ရေညိုတက်ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်သည်။
Royal Cupid ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အဆောက်အဦး အတွင်းပိုင်း အလှဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို လည်းလူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ လူကြီး မင်းတို့ နေအိမ် ရှိ အိမ်ခန်း အတွင်းပိုင်း အလှဆင်ခြင်းများကိုလည်း လုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အိပ်ခန်း ( Bedroom Interiors Decoration ) များကို အလှဆင် လိုပါက Royal Cupid ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။
အရည်အသွေးမြင့် အိပ်ခန်း အလှဆင် Wallpaper များ
အစိမ်းရောင်က မျက်စိအေးစေတဲ့ အရောင်တစ်ရောင်ဖြစ်သည်။စိတ်ကို အေးမြစေပြီး စိတ်သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေတောတွေကြောင့် အိပ်ခန်းတွေမှာ အဓိက Main Colour အဖြစ်ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။အပြာကလည်းအေးချမ်းတဲ့ အရောင်တစ်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အမောပြေစေပြီး စိတ်ကို ကြည်လင်စေတဲ့အရောင်ဖြစ်စေတာကြောင့် အပြာရောင်ကိုလည်း အိပ်ခန်းတွေမှာ အဓိကအရောင်အဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။သင့် ရဲ့ အကြိုက်ကရော ဘယ်အရောင်ဖြစ်မလဲ ? လှပပြီး လူတိုင်းငေးမောရတဲ့ အိမ်လေးဖန်တီးဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပရိဘောဂ ပစ္စည်းအစုံအလင်ကို ENCHANT မှာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ဆန်းသစ် လှပမှု အပြင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုကြောင့် စိတ်ချမ်းသာမှု အပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်မှာ အသေချာပင်ဖြစ်သည်။သင့်စိတ်ကူးထဲက အိမ်မက်တွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ENCHANT ကို အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ခင်ဗျာ။
SCG အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ကောင်းမွန်သော Glass Block
Tiger Supply Company မှဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသော SCG အမှတ်တံဆိပ် Glass Block များအကြောင်း မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။ ထုထည်မာကျောပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြောင့် အကြမ်းခံကာ တာရှည်အသုံးခံသည်။ အုတ်ကဲ့သို့ မာကြောအက်ကွဲခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ။ လျပ်စစ်မီး မလိုပဲ နေ့အချိန်တွင် အလင်းရောင်ကို ကောင်းစွာ ရရှိစေရန် အထောက်အပံပေးသော လှပကောင်းမွန်သည့် မှန်ချပ်များ ဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းမှာလည်း အတင့်သင့်ရှိပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသောကြောင့် အသုံးပြုရ အဆင်ပြေစေသည်။Tiger Supply Company တွင်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် Instock items ✅Ocean wave ✅Coral ✅Line wide ✅Crystantic ✅Checker ✅Lattice
မွန်မြတ်သောစေတနာ၊ ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်း၊သေသပ်ကောင်းမွန်သော လက်ရာများနှင့် နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံများပေါင်းဆက်လျှက်အဆောက်အဦးအတွင်း၊အပြင် အလှဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို တိကျမှန်ကန်မြန်ကောင်း၊သက်သာစေရန် ညိုနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။မျက်နှာကြက်များ နှင့် ခန်းဆီးနံရံများကို ပလာစတာကောနစ်၊ ဂျပ်ဆင်ဘုတ်၊ပလာစတာဘုတ်များဖြင့် ဆန်းသစ်လှပသေသပ် ကောင်းမွန်စွာ စိတ်ကျေနပ်ကြည်နူးမှုဖြစ်စေရန် အလှဆင်ပေးနေပါသည်။ဒီဇိုင်းဆန်းသစ် လှပပြီး ခိုင်ခံသပ်ရပ်သော မျက်နှာကျက်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူနေမှု အဆင့်တန်း မြင့်တင်ပေးလျက်ရှိသည်။သင့်အိမ် မျက်နှာကြက်များကို လှပစွာ ဖန်တီးဆောင်ရွက်ဖို့ Mother&#039;s Son Company မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။
<p>ခတျေမီသနျ့ရှငျးသော Stainless Steel Kitchen Cabinets မြားကို Favourite Company မှ ဝနျဆောငျမှုပေးနပေါသညျ။</p><p><br></p><p>အားသာခကျြမြားကတော့</p><p><br></p><p>- Titanium Coated 304 Stainless Steel ဖွငျ့ အသုံးပွုထားသောကွောငျ့ တံခါးမြား ဆေးသားတောကျပွောငျခိုငျခံ့ပါသညျ။</p><p><br></p><p>- နိုငျငံခွားနညျးစနဈဖွငျ့ ခတျေမီသော Machine မြားဖွငျ့ ခေါကျထားပါသဖွငျ့ လကျရာသသေပျ ခိုငျခံ့ပါသညျ။</p><p><br></p><p>- High Quality Accessories မြားဖွငျ့ သုံးစှဲထားပွီး Stainless Steel Titanium Plating ဖွငျ့ အရောငျတငျထားသောကွောငျ့ တံခါးမြားသညျ လှပပွီး ကွာရှညျခိုငျခံ့ပါသညျ။</p><p><br></p><p>- အပူခဏျခံနိုငျ၍ မီးကူးလောငျမှုမရှိခွငျး။</p><p><br></p><p>- မှိုမတကျခွငျး၊ အစိုပွနျ ဖောငျးပှမှုမရှိခွငျး။</p><p><br></p><p>- ပိုးဟပျမြား မနနေိုငျခွငျး။</p><p><br></p><p>- ကွှကျမဖောကျနိုငျခွငျး။</p>
လှပ သေသပ် ပီး ဒီဇိုင်းဆန်သည့် ရေချိုးခန်းများ ( Bath Room )
Mya Nan Dar ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အဆောက်အဦး၊ ဟိုတယ် များတွင် ရှိ သော ရေချိုးခန်းများကို လှပပီးခေတ်မှီ ဒီဇိုင်းဆန်သော ရေချိုးခန်းများ အဖြစ်သို့ ပြောင်း လဲ လာစေရန် အိမ်အတွင်းပိုင်းများကို အလှဆင်ပေးနေသော ကုမ္ပဏီများဖြစ်ပါသည်။ လူကြီး မင်းတို့ ၏ ရေချိုးခန်းများကို လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက် စိတ်တိုင်းကျအလှဆင် ဆောင် ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အတွင်းပိုင်း အလှဆင်ပေးရာ၌ လူကြီး မင်းတို့ ၏ အိမ်တွင်ရှိသော ရေချိုးခန်းများကို ခေတ်မှီဆန်းသစ်လှပသော ရေချိုးခန်းများ အဖြစ်အလှဆင်လိုပါက Myan Nan Dar ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။